सिद्धार्थ बैंकको हकप्रद बिक्री खुला, कहाँ जाने फारम भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिद्धार्थ बैंकको हकप्रद बिक्री खुला, कहाँ जाने फारम भर्न ?
काठमाडौं - फागुन २ गतेदेखि सिद्धार्थ बैंकको १०% हकप्रद सेयर बिक्री खुला भएको छ । बैंकले १०ः१ अनुपातमा ६८ लाख २६ हजार ११७.१९ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको यो हकप्रद चैत ६ गतेसम्म भर्न पाइनेछ ।
बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेड, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं तथा सिद्धार्थ बैंकको मुख्य कार्यालयसहित अधिकांश शाखाबाट पनि हकप्रद भर्न पाइनेछ । त्यसैगरी, सिद्धार्थ क्यापटिल लिमिटेड तथा आस्वा सदस्य बैंकहरु र तिनका शाखा कार्यालयबाट पनि हकप्रद भर्न सकिनेछ । बैंकले चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८४ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैयाँको १०% हकप्रद निष्कासन गरेको हो । १०% हकप्रदपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ५० करोड ८७ लाख २८ हजार ८७० रुपैयाँ पुग्नेछ ।